के तपाईको दाँत असाध्यै दुख्छ ? यी ८ प्राकृतिक तरिकाले दिनेछ आराम - Civil Khabar
के तपाईको दाँत असाध्यै दुख्छ ? यी ८ प्राकृतिक तरिकाले दिनेछ आराम
by civilkhabar २०७७ फाल्गुन १०, सोमबार ११:३२ २०७७ फाल्गुन १०, सोमबार ११:३३ 0
काठमाडौं । दाँत दुख्नु एक साधारण समस्या हो तर कहिलेकाँही यसको दुखाई असह्य हुन्छ । दाँत दुख्दा कतिपय अवस्थामा अनुहार सुन्निने, टाउको दुख्नेलगायतका समस्या निम्तिने गर्छन् ।
साधारणतया अत्यधिक तातो वा चिसो खानेकुरा खाँदा, दाँत सफा नगर्दा, क्याल्सियमको कमी, ब्याक्टेरियल संक्रमण वा दाँतको जरा कमजोर हुँदा दाँत दुख्ने गर्छ । साथै बुद्धि बंगारा आउने क्रममा पनि दाँत असाध्यै दुख्छ ।
अम्बाका साथै अम्बाको पात पनि निकै फाइदाजनक छ । यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । दाँत दुख्दा अम्बाको ताजा पात चपाउँदा पनि राहत महसुस हुन्छ । यसबाहेक तपाईंले यी पातलाई पानीमा उमालेर चिसो बनाउनुहोस् र यसमा नुन मिसाएर कुल्ला गर्नुहोस् । यो तरिका अपनाउँदा पनि दाँत दुख्न कम हुन्छ ।एजेन्सी
१० वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भएको प्रमाण देखाउनुस्, म राजीनामा दिन्छु : खानेपानीमन्त्री
civilkhabar २०७७ मंसिर २९, सोमबार ११:१५
एनआरएनएले दियो लिदीका पहिरो पीडितलाई ५ लाख आर्थिक सहयोग
civilkhabar २०७७ भाद्र १७, बुधबार १४:२१
थप ९४ जनामा कोरोना पुष्टि, ७१ निको भए
civilkhabar २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १६:४१